मेरो वेबसाइटको लागि शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्ने उत्तम प्रविधिहरू कुन हो?
शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू कमाउने सही तरिका संग एक उचित लिङ्क बिल्डिंग रणनीतिले सधैँ वेब ट्राफिकमा राम्रो लाभ प्रदान गर्दछ र SERPs को सूची मा एक मापन योग्य सुधार सुधार गर्नेछ।. पहिले हामी तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगमा केहि शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू दिनको लागि हालको सबैभन्दा कुशल प्रविधिहरू र अभ्यासहरूको सूचीमा हेर्नु अघि, मेरो व्यक्तिगत अनुभवको साथ सुरू गर्न दिनुहोस्।. म एसईओ को लागि एक उचित li बिल्डिंग रणनीति चलिरहेको बेला देखि बचने को लागि केहि विधिहरु को एक नजर ले सुझाव दिन्छ.
सबै पछि, शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्ने थुप्रै राम्रा तरिकाहरू छन्. एकै समयमा, त्यहाँ धेरै गलत तरिकाहरू छन् जुन सजिलै Google द्वारा गम्भीर श्रेणीबद्ध दण्डको परिणाम हुन सक्छ, र तपाईंको वेबसाइटको पुनःप्राप्ति सामान्यतया एक धेरै कठिन प्रक्रिया हो।. यसबाहेक, जब यो बिस्तारै आउँछ, प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा अपरिवर्तनीय हुन सक्छ. यस प्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई रोक्न, यहाँ सबै लागतमा जोगिनै पर्छ:
ब्याकलिङ्कहरूसँग खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने काम;
लिङ्क इमारतको कुनै पनि स्वचालित प्रणालीको लागि आवेदन गर्दै;
लिङ्कका साथ ठूलो एक्सचेन्जहरू;
इन्टरलिंकिंग नेटवर्कको साथ काम गर्दै;
अप्रासंगिक ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्दै र तिनीहरूलाई बाँच्न बनाउँदछ;
उच्च गुणस्तर लिङ्कहरूको सट्टा मात्राको प्रयोग गर्दै;
खेतहरू वा ब्याकलिङ्क उत्पन्न वेब-रङहरू लिङ्क गर्न लिनु.
बेशक, यी योजनाहरु को प्रयोग गरेर तपाईंलाई शीघ्रता संग पनि अझै सम्म अल्पकालिक श्रेणी को बढावा दिन सक्छ. यद्यपि, तिनीहरू सबै चाँडै नै पकड हुनेछन् र Google द्वारा चाँडो हुनेछ, चाँडै वा पछि. सम्झनुहोस्, कम गुणस्तरको वेबसाइटहरू र डोमेनहरू कुनै पनि शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू र उच्च श्रेणीको साथ लामो-स्थायी प्रगतिको लागि जाने बाटो होइन।. यही कारणले गर्दा Google ले सधैँ गुणस्तर लिङ्क खोज्न सर्वोत्तम काम गरिरहेको छ, म तपाईंलाई धेरै प्रविधिहरू र अभ्यासहरू देखाउन जाँदैछु जुन मैले पणको लागि सबै भन्दा उचित पाएको छु।. वैसे, मैले ती सबै मेरो आफ्नै व्यवसाय वेबसाइटमा परीक्षण गरे. यहाँ तपाईंले सर्वोत्तम एसईओ परिणामहरूको लागि शक्तिशाली ब्याकलिङ्क कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ:
1. आन्तरिक लिङ्कहरू वेबसाइटको पूर्ण ब्याकलिङ्क प्रोफाइलमा प्रायः धेरै व्यक्तिहरूले पनि उपेक्षा गरेका छन्. निस्सन्देह, आन्तरिक लिंकहरू वास्तवमा एक पृष्ठबाट अर्कोमा आउँदैछन् - एक मात्र वेबसाइट भित्र. तथापि, तथापि, जब राम्रो तरिकाले राम्रो र पूरै पूरै कीवर्ड संग एम्बेडेड गरिन्छ, तपाईंको आन्तरिक लिंक निम्न लाभ प्रदान गर्न सक्छ:
सम्पूर्ण वेबसाइट को बेहतर पेज प्राधिकरण;
लिङ्कको रसको बराबर वितरण;
सम्पूर्ण वेबसाइट मा कम उछाल दर;
सुधारिएको यातायात र तपाईंको पुरानो पृष्ठ सामग्रीको प्रदर्शन;
सामरिक अन्तरलिङ्कले उच्च खोजशब्द रैंकिंगमा योगदान दिन सक्छ.
2. स्थानीय व्यापार उद्धरणहरू तपाईंको मुख्य व्यवसाय वेबसाइटमा शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्नका लागि उपयुक्त अवसरहरू हुन्. तपाईंको स्थानीय खोज पदहरू सुधार गर्न र एकै समयमा आफ्नो वेबसाइटको प्राविधिकलाई बलियो बनाउन निश्चित गर्नुहोस्. तपाईलाई यहाँ आवश्यक छ सबै Google को समान, NAP गुणहरू राख्न को लागी प्रमुख खोज इन्जिन जस्तै गुगल, याहू र Bing.
3. तपाईंको सम्मिश्र पृष्ठ सामग्री लाई अझ सम्भवतः केहि सम्बंन्धनमा पुनरुत्पादन गर्ने, जस्तै infographics, तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगमा अधिक शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू बनाउनको लागी एक महान प्रविधि हो।. यसबाहेक, यो एकै समयमा तपाईंको सार्वजनिक सम्पर्क सुधार गर्न एक साँच्चै रचनात्मक र सुन्दर योजना हुनेछ. तपाईंले उच्च-गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू कमाउनु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ईन्टरोग्राफिकहरू स्पष्ट, सरल र सम्भवतः तपाईंको दर्शकको लागि प्रासंगिक छन्।. साथै, तिनीहरूको औसत साइज 2000 पिक्सल सम्म आउँदो साथ छिटो लोडिङ गति कोयम राख्न प्रयास गर्नुहोस्. तीन रङ भन्दा बढी र2फन्टहरूको अधिकतममा टाँस्नुहोस्. और एक रोमांचक कहानी बनाउन को लागि भूल न गर्नुहोस कि अन्त को प्रयोगकर्ता को जिज्ञासा को बनाए रखेगा. एक पटक तपाईंको सर्वोत्तम इन्फोग्राफिक्स गरे पछि, भर्खरै भर्खरै समर्पित वेबसाइटहरू पठाउनुहोस् - Google मा विशिष्ट आदेशहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै "infographic पेश गर्नुहोस्," "inurl / intitle: इन्फोग्राफिक जमा गर्नुहोस्," "allintext: इन्फोग्राफिक जमा गर्नुहोस्," आदि। Source .